Plezi One: Aalad bilaasha ah oo aad ku Abuuri karto Hogaaminta Mareegtaada B2B | Martech Zone
Plezi One: Aalad bilaasha ah oo Lagu Abuuro Lehyada Mareegahaaga B2B
Talaado, Janaayo 4, 2022 Talaado, Janaayo 4, 2022 Paul-Louis Valat
Dhowr bilood ka dib samaynta, Plezi, Bixiyaha software-ka suuq-geynta ee SaaS, wuxuu soo bandhigayaa badeecadiisa cusub ee beta dadweynaha, Plezi One. Qalabkan bilaashka ah iyo dareenka leh wuxuu caawiyaa shirkadaha yar yar iyo kuwa dhexdhexaadka ah ee B2B inay u beddelaan shabakadooda shirkadeed goobta jiilka rasaasta. Hoos ka ogow sida ay u shaqeyso
Maanta, 69% shirkadaha leh mareegaha waxay isku dayayaan inay horumariyaan muuqaalkooda iyagoo u maraya kanaalo kala duwan sida xayeysiinta ama shabakadaha bulshada. Si kastaba ha ahaatee, 60% iyaga ka mid ah ma laha aragti ku saabsan inta ay le'eg tahay wax ka beddelkooda shabakadda.
Iyadoo la kulma kakanaanta dhammaan xeeladaha suuq-geynta dhijitaalka ah ee kala duwan, maareeyayaashu waxay u baahan yihiin laba shay oo fudud: si ay u fahmaan waxa ka dhacaya shabakadooda iyo inay abuuraan hogaaminta shabakadda.
Ka dib 5 sano oo taageeraya in ka badan shirkadaha 400 oo leh barnaamijyadeeda suuq-geynta oo dhan, Plezi waxay dooneysaa inay sii socoto iyada oo soo bandhigtay Plezi One. Ujeedada ugu weyn ee software-kan bilaashka ah ayaa ah in loo beddelo degel kasta oo dhaliya dhaliye rasaas ah, si loo taageero tiro badan oo ganacsiyo ah laga bilaabo marka ay bilaabaan.
Aalad Fudud Oo Loogu Bedelo Mareegtaada Mid Dhaliyaha Lead
Plezi One waxa ay fududaysaa soo saarista hogaan tayo leh iyada oo si aan kala go 'lahayn ugu daraysa foomamka fariimaha tooska ah ku socda ee goobaha shirkadaha. Waxa kale oo ay kuu ogolaanaysaa inaad fahanto waxa hogaanka kasta ka samaynayo goobta, iyo sida ay isu beddesho usbuuca ka dambeeya asbuuc ka dib oo leh muraayado nadiif ah.
Tani waa wax la tixgeliyo haddii aad bilaabayso safarkaaga dhijitaalka ah oo aad weli raadinayso xalka ugu fiican ee jiilka rasaasta iyo raadraaca shabakadda oo la isku daray. Faa'iidada ugu weyn ee Plezi One waa inaadan u baahnayn inaad wax aqoon farsamo ah u leedahay si aad u isticmaasho ama aad u bilowdo suuqgeyn. Waa kan sida ay u shaqeyso
Bilow istaraatiijiyadaada jiilka hogaanka
Foomamku waa habka ugu habboon uguna toosan ee loogu rogi karo booqde aan la garanaynin hoggaan u qalma bogga internetka. Waxaana jira fursado badan oo lagu heli karo booqde si uu u buuxiyo foom, haddii ay tahay in lala xidhiidho, codsado xigasho, ama helitaanka warqad cad, warside ama webinar.
On Plezi One, qaab abuurista waxa la sameeyaa isla marka aad ku darto kheyraad cusub. Plezi waxay bixisaa habab kala duwan, oo leh su'aalo lagu habeeyey noocyada kala duwan ee foomamka si ay u dhigmaan marxaladaha wareegga iibka (oo iska hubi inaadan kharribin booqde si fudud u raba inuu saxiixo warsidahaaga su'aalo).
Haddii aad rabto in aad abuurto template foomka kuu gaar ah, waxaad ku samayn kartaa adigoo isticmaalaya tifaftiraha oo dooro beeraha aad rabto in aad isticmaasho. Waxaad u habayn kartaa foomamka si ay ugu habboonaadaan naqshadaynta degelkaaga. Waxaad sidoo kale u habayn kartaa fariintaada ogolaanshaha GDPR. Markaad abuurto qaab-dhismeedka, waxaad ku dari kartaa boggaaga hal gujis!
Waxa kale oo aad samayn kartaa iimaylo daba-gal ah oo si toos ah loogu diro dadka foomka buuxiyey, haddii ay tahay inaad u soo dirto agab la codsaday ama si aad u hubiso in codsigoodii xidhiidhka la daryeelay. Adigoo isticmaalaya goobaha casriga ah, waxaad xitaa ku gaaryeelan kartaa iimayladan magaca koowaad ee qofka ama agabka si toos ah loo soo galiyay.
Faham Dhaqanka Dhegaystayaasha oo U-qalma Hoggaanka
Hadda oo booqdayaashaadu bilaabeen inay buuxiyaan foomamkaaga, sidee baad uga faa'iidaysan kartaa macluumaadkooda? Tani waa meesha Plezi One's Contacts ay soo gasho, halkaas oo aad ka heli doonto dhammaan dadka ku siiyay macluumaadka xiriirka. Xiriir kasta, waxaad ka heli doontaa dhowr waxyaalood oo kaa caawin doona inaad shakhsiyeyso habkaaga:
Waxqabadka booqdaha iyo taariikhda ay ka mid yihiin:
Waxa la soo dejiyay
Foomamka la buuxiyey
Bogagga lagu arkay goobtaada
Kanaalka iyaga keenay goobtaada.
Faahfaahinta rajada. la cusboonaysiiyay isla marka uu xidhiidhku bixiyo macluumaad cusub isagoo la falgalaya macluumaad kale:
First iyo Magaca awoowe
Tabkan waxa kale oo loo isticmaali karaa sidii madal maamulka xidhiidhka macmiilka yar (mini)CRM) haddi aanad wali haysan. Kooxdaada wax iibinta ayaa markaa ku dari kara qoraalo diiwaan kasta si ay ula socdaan horumarka xidhiidhka rajadaada.
Waxaad ka hubin kartaa dhammaan isdhexgalka dhagaystayaashaada mareegahaaga, maadaama isdhexgalkan la duubay. Waxaad fikrad fiican ka heli doontaa waxa dhagaystayaashaadu raadinayaan iyo waxa ku jira ee laga yaabo inay xiiseynayaan.
Qoraalka raadraaca ayaa ku tusi doona halka rajadaadu ka imanayso, waxa ay ka samaynayaan mareegahaaga iyo marka ay soo noqdaan. Tani waa sifo faa'iido leh sababtoo ah waxay ku siinaysaa aragti ka hor intaadan bilaabin wadahadal iyaga. Falanqaynta ayaa kaa caawin karta inaad la socoto oo aad fahamto rajadaada.
Falanqee Waxqabadka Xeeladdaada
Qaybta warbixinta waxay kuu ogolaanaysaa inaad aragto tirakoobka ficilada suuqgeyneed ee jaleecada. Plezi waxay dooratay inay diiradda saarto xogta muhiimka u ah fahamka waxqabadka goobtaada iyo istaraatiijiyada suuq-geynta, halkii aad ku noolaan lahayd jaantusyada jahawareer iyo la kala saari karo. Waa hab fiican oo loogu talagalay maamulaha ama iibiyaha si uu ula qabsado suuqgeynta dhijitaalka ah!
Halkan waxaad ku arki kartaa wax kasta oo ka dhacaya goobtaada muddo wakhti ah, oo leh tirada booqdayaasha iyo suuqgeynta, iyo sidoo kale garaaf ka mid ah maabka beddelkaada si aad u aragto inta macaamiisha ah ee suuqgeyntu kuu keentay. Hagaajinta mashiinka raadinta (SEO) qaybtu waxay kuu ogolaanaysaa inaad aragto inta kelmadood ee muhiimka ah ee lagugu dhejiyay iyo meesha aad ku jirto.
Sida aad arki karto, Plezi One wuxuu ka soo horjeedaa hadhuudhka xalalka aadka u adag (oo inta badan aan laga faa'iidaysan) iyadoo la siinayo khibrad dareere ah oo qalab ah oo udub dhexaad u ah istaraatiijiyada suuqgeynta ee shirkadda.
Waxay bixisaa khibrad dareen leh si ay ugu oggolaato shirkadaha aan weli haysan koox u go'an inay bilaabaan inay fahmaan nuts iyo boodhadhka suuqgeynta dhijitaalka ah oo ay bilaabaan abuurista hoggaan iyagoo adeegsanaya shabakadooda. fududahay in la rakibo, fududahay in la isticmaalo iyo 100% bilaash ah! Ma xiisaynaysaa helitaanka hore ee Plezi One?
Isku qor Plezi One bilaash halkan!
Tags: b2bjiilka hogaaminta b2bCRMqaab abuuristahabyaalada foomkaqalabka foomkaqabashada hogaankahogaaminta genjiilka ledshahaadada hogaamintapleziplezi midu qalma hogaamintawaxqabadka booqdaha
Paul-Louis waa maamulaha gaadiidka ee Plezi, B2B software automation marketing ee suuqgeeyayaasha.
Xayeysiiska Dhaqanka vs. Xayeysiiska Macnaha guud: waa maxay faraqa u dhexeeya?
6 Siyaabood Oo Loola Shaqeeyo Saamaynayaasha Aan Lahayn Kafilo